Macalin Maxamuud oo ku dhowaaqay in Ahlu-Sunna ay hubkooda lasoo baxayaan - Awdinle Online
Macalin Maxamuud oo ku dhowaaqay in Ahlu-Sunna ay hubkooda lasoo baxayaan
February 14, 2020 (Awdinle Online) –Hoggaamiyaha ururka Ahlu-Sunna Waljamaaca Macallin Maxamuud ayaa ku dhowaaqay in Ahlu-Sunna ay lasoo baxayaan hubkooda, si ay uga hortagaan “fasaadka.”
Macallin Maxamuud oo taageerayaasha kooxda Ahlu-Sunna kula hadlayey magaalada Dhuusomareeb, ayaa odayaal shalay laga celiyey inay aadaan Guriceel u sheegay “in haddii hubkooda ay wadan lahaayeen aysan jiri lahayn cid is-hortaagta.”
“Haddii umadda bahal noqoto, bahalnimada waxaa la isaga celiyaa qalab, ee hadal ma qaato, wax munaasab ahna ma qaato,” ayuu yiri Macallin Maxamuud.
“Caawa laga billaabo waxana hub leenahay waan raadsaneynaa, waan soo qaadaneynaa, waana wadanayenaa, dowlad ku dhibi meyno, qof muslim ahna ku dhibi meyno, balse fasaadka waan isaga dhicineynaa,” ayuu yiri.
Macallin Maxamuud oo sidoo kale soo hadal qaaday qarax shalay ka dhacay magaalada Dhuusomareeb, ayaa sheegay in magaalada “loo gacan geliyey” kooxda Al-Shabaab.
Hadalkiisa ayaa imanaya ayada oo magaalada ay horey uga taagneyd xiisad u dhaxeysa dowladda iyo Ahlu-Sunna.
Dhuusomareeb ayaa waxaa ku wada sugan labada madaxweyne, oo kala ah Sheekh Maxamed Shaakir oo garabka Ahlu-Sunna ah, iyo Axmed Qoor Qoor oo garabka dowladda ah.
Previous articleTaliyihii Ciidanka Haramacad ee DF iyo 34 Askari oo u Goostay Jubbaland
Next articleEU announces €5.17 million support to education in Somalia